မောငျ(စှယျစုံကမျြး): Phone ပြောနေတာကို အမှတ်တရ ပြန်နားထောင်ဖို့အသံဖမ်းထားချင်ရင်
လုပ်လို့ ရပါတယ် ဖုန်းပြောရင် သတိထားဖို့ လိုတယ် ။တဖက်က အသံဖမ်းထားရင်
Author Anonymous at 1:16:00 AM
kyaw zay ya said...
၀မ်းမနဲ့ ပါနဲ့ ကွယ် ( မရရင် မေးကနေ တောင်းပါ zwmnna@gmail.com ) လို့ ရေးပေးထားပါတယ် မေးကနေဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် Gplay ip ကို ban တယ်လို့ ကြားပါတယ် မြန်မာကဆိုရင်ပြောတာပါ။ ၀မ်းမနဲ့ နော်..အီးမေးကသာဆက်သွယ်လိုက် နေ့ မကူးစေရဘူး ရောက်ပို့ ပေးတယ်း)
ako samsung glaxy s2 မှာ bluetooth ဖွင့်တာနဲ့ restart ပြန်ပြန်ကျနေပါတယ် ကူညီပေးပါ ဦး ကျွန်တော့်gmail က yarhooethar@gmail.com ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ako samsung galaxy s2 မှာ bluetooth ဖွင့်တာနဲ့ restart ပြန်ပြန်ကျနေတယ် bluetooth လဲသုံးလို့မရဘူး အဲဒါကူညီပေးပါ ဦး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
viber account ဖွင့်လို့မရလို့ ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲခင်ဗျာ
မြန်မာကဆိုရင်တော့ SMS ပြန်မလာတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ပြည်ပက ဖုန်သုံးပီးဖွင့်လည်းရပါတယ်
ကျနော့်ရဲ့ iPhone4 က link တွေကို download လုပ်လို့မရဘူး။ကူညီပါအုံးနော်။
ဆမ်ဆောင်း တက်စ်2မှာမြန်လိုထဲ့တာ ဂျီတော့လ်တော့အဆင်ပြေတယ်
သတင်းဆိုဒ်တွေဖတ်လိုမရဘူး အတုံးလေးတွေပဲပေါ်တယ် ရှိရင်မျှပါအုံး
မရပါဘူးအကိုရေ အခွင်ကြီးပဲပေါ်နေတယ်အကို ကူညီပေးပါအုန်း bohlaing820@gmail.com ပါအကို
plz! send to me by mail it. my mail is ottramoon@gmail.com . thank alot admin.
down လို့မရဘူး အကို ကူညီပါဦးနော်
,I want to Record My Call
tuntunu99@gmail.comပါပို့ ပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးပဲ အကိုရေ အဆင်ပြေသွားပြီ
မြန်မာဖုန်းလေးရလို့ဝမ်းသာမယ်ရှိသေ သီချင်းတောင်းဒါ ခက်လိုက်တာဟူးစိတ်လေပါတယ်